Nubia ZXNUMX: características, ficha técnica y precio | Androidsis
I-Nubia Z18 isemthethweni: 5.99 ″ FullHD + isiboniso, i-Snapdragon 845 SoC kunye nokunye
Njengoko inkampani eyenziweyo phantsi kweZTE yayisele ibhengezile, iNubia Z18 ityhilwe namhlanje. Oku kwenzeke nje e-IFA eBerlin, eJamani, apho usuku lokugqibela lwale teknoloji ibalulekileyo yenzekile.
Njengoko kulindelekile, ifowuni entsha kraca iza neempawu ezikumgangatho ophezulu, apho sibalaselisa khona isikrini esikhulu esine-notch encinci, iprosesa ye-octa-core yeQualcomm Snapdragon 845 kunye neenkcukacha zobuchwephesha ezenza isiphelo esinamandla kunye nesitayile.
I-Nubia Z18 iza ixhotyiswe ngesixhobo esikhulu Iscreen se-LTPS ye-5.99-intshi ye-intshi ene-FullHD + isisombululo seepixels ezingama-2.160 x 1.080, ke ifomathi esisinika yona ngu-18: 9. Oku, enkosi kwinto yokuba ibanjwe yimida emxinwa kwicala ngalinye, ihlala kwi-85.8% yepaneli yonke yangaphambili. Ukongeza, asinakho ukungayihoyi into yokuba ifika nenotshi ethe yancitshiswa kwaye encinci, endaweni yokuba izibonakalise njengebhari ethe nkqo, endaweni yoko, yimbo "yokulahla kwamanzi" esikufumanayo Oppo F9 Pro esanda kukhutshwa.
Ngokubhekisele kumacandelo ayo aphambili, njengoko besesitshilo, Isixhobo sonwabela zonke izibonelelo ezinikezelwa yiQualcomm's Snapdragon 845. Le SoC isibhozo-engundoqo iyakwazi ubuninzi. 2.8 GHz, ke kuyacaca ukuba i-terminal iya kuba nakho ukuqhuba, ngaphandle kwengxaki, nkqu nezona mfuno zokusebenza kunye nemidlalo kwiGoogle PlayStore.
Njengamaqabane kwiprosesa ephethwe yile terminal, inkampani ikhethe ukubandakanya inkumbulo ye-RAM ye-6 kunye ne-8 GB ngaphakathi kwayo, kunye nendawo yokugcina yangaphakathi ye-64 kunye ne-128 GB, esinokuthi sandise sisebenzisa ikhadi le-MicroSD. Oku kuphakamisa ukuba iza kwiinguqulelo ezimbini, kunjalo. Kwangelo xesha, ukuhlala nokwenza imisebenzi yethu yonke, iselfowuni entsha ixhotyiswe nge- I-3.350 mAh ibhetri ene-26 W yokutshaja ngokukhawuleza, ephinda igcwalise itheminali ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-50 ngaphantsi kwesiqingatha seyure.
Kwicandelo lokufota, iNubian Z18 ine Inkqubo yekhamera ye-16 kunye ne-24MP ngasemva ene-f / 1.6 yokugxila ekugxilwe kuzo zombini iilensi, Gxila kwi-OIS, i-EIS, i-4K yokurekhoda amandla kunye nokuphuculwa kwe-AI. Aba batoli bajonge ngaphambili bayakwazi ukusinika isiphumo esivuyayo seBokeh, kunye nokonwabela i-NeoVision E1, echaza iindawo ezahlukeneyo zemifanekiso. Kwicala elingaphambili, i-smartphone ineqhayiya lesisombululo se-megapixel eyi-8, eya kusinceda ukuba sithathe ii-selfie, iifowuni zevidiyo kwaye siyivule ngombulelo kubuchwephesha bokwazisa ubuso.
Isixhobo siza ne-Android 8.1 Oreo njengenkqubo yokusebenza. Sikwazile ukufunda ngomnwe ngasemva kwayo, ukwenza ukungavuli, kunye nezinto ezininzi zonxibelelwano, ezinje ngeWiFi ac, itekhnoloji yeNFC yokwenza iintlawulo, iBluetooth 5.0 kunye nohlobo C lwe-USB, kunye neGPS, A- GPS kunye I-GLONASS, ukuze ingalahleki.
1 Iphepha ledatha yeNubia Z18
Iphepha ledatha yeNubia Z18
ISIKHUMBUZO I-5.99 "FullHD + 2.160 x 1.080 pixel LTPS LCD enotshi
i-RAM 6 / 8 GB
ISIKHUMBUZO SANGAPHAKATHI I-64/128 GB iyandiswa nge-microSD
IINKCUKACHA Ngasemva: I-16 kunye ne-24MP (f / 1.6) kunye ne-EIS / OIS / AI. Ngaphambili: 8MP
IBATTERI I-3.350 mAh ene-26 W yokutshaja ngokukhawuleza
UQHAGAMSHELWANO WiFi ac. I-NFC. IBT 5.0. Uhlobo lwe-USB C. GPS. A-GPS. Uluhlu lwamagama egama GLONASS
IIMPAWU ZE-OTRAS Umfundi ongasemva weminwe. Ukuqwalaselwa kobuso
Ubungakanani kunye nobunzima 147.5 x 70.6 x 9.1mm / 151g
I-Nubia Z18 inikwe nje ngeendlela ezimbini: I-6GB ye-RAM ene-64GB ye-ROM kunye ne-8GB ye-RAM ene-128GB ye-ROM. Zombini ziya kufumaneka zibomvu, zimnyama kunye nohlelo olwenziwe olwakho kunye neVan Gogh's Night Star.
Owona mthwalo usezantsi we-RAM kunye ne-ROM ubiza malunga ne-2.799 yuan, ethi yona, iguqulwe, ilingane ne-355 ye-euro, ngelixa eyona inexabiso eliphakamileyo ifikelela kwi-3.299 yuan, emalunga nee-euro ezingama-419 ngexabiso lokutshintshiselana. Inguqulelo ekhethekileyo iya kubiza i-3.299 yuan (419 euros approx.).
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » ZTE » I-Nubia Z18 isemthethweni: 5.99 ″ FullHD + isiboniso, i-Snapdragon 845 SoC kunye nokunye
I-Instagram iphuhlisa usetyenziso olukhethekileyo lokuthenga: IG Shopping
I-Galaxy Note 5 kunye neGalax S6 Edge + ziya kuyeka ukufumana uhlaziyo lwokhuseleko lwenyanga